Jose Mourinho Oo Ka Hadlay Suurtagalnimaa Real Madrid Looga Iibsan Karo Real Madrid - Laacib.net
Jose Mourinho Oo Ka Hadlay Suurtagalnimaa Real Madrid Looga Iibsan Karo Real Madrid
Ma ahay waqti hore markii la’isla dhexmarayey in Cristiano Ronaldo ka tagayo Real Madrid, laakiin Jose Mourinho waxa uu qabaa in hadda albaabkaas xirmay.
Haddii uu garabka go’aansado ka tegidda Real tababarihiisii hore ee Estadio Santiago Bernabeu waxa uu aamainsan yahay in ay tahay horudhiciisa ka farriisiga ciyaraha oo uu ku aado doono Mareykanka ama horyaaladda la midka ah.
“Waxaan aaminsannahay in Real Madrid aysan iibin karin, waa mamnuuc,” ayuu u sheegay Record Mourinho.
“Waa in uu joogaa ilaa iyo marka ay ka fasaxaaan, oo uu sanad ku ciyaaro America ama meel kale oo uu rabo in uu ku raaxeysto. Waa albaab xiran.”
Mancehster United, midda uu majaraha u hayo Jose Mourinho iskuma dayyi doonto raadinta Ronaldo walow uu Jose sheegay in aysan adag tahay in ciyaaryahan noocaas ah ‘Maya’ la dhoho.
“Sidaas ma qabo, laakiin dadka oo dhan wey yaqaanaan taariikhdiisa Mancehster, kalgacalka ay u hayaan waxaana jira ciyaaryahanno dunida ah kuwaas oo haddii kooxi hesho suurtagalnimada ah in ay la saxiixato, aysan dhihi doonin maya,” ayuu raaciyey.”
Salah 17-05-2018 at 9:02 pm -
Real oo real laga iibsanayo hhhhhhh
SaalI'llm 17-05-2018 at 7:52 pm -
Jaalle sory aqon kuuma lihi lkn qoralka afsomaliga intada soo update garayn iska sxb sxb xataa dadka laga fiirsada siday wax uqoran si aad magacaga iyo shaqafada u ilaashato thnks
Victor Lindelof 17-05-2018 at 6:50 pm -
Waar waxan JAALE la leeyahay ka qabta webka kan waa idin la dagay
Qof afraad raadsada